Ederede Adrian Chang na Martech Zone |
Edemede site na Adrian Chang
Adrian Chang, onye isi nduzi nke ndị ahịa na Informatica, bụ onye ọsụ ụzọ na-ahụ maka njikwa ọrụ. Ọ bụ onye mmeri na - emeri emeri na B2B chọrọ ọgbọ, ọganiihu ndị ahịa, na azụmaahịa dijitalụ, ọ na - agbanwegharị etu esi arụ ọrụ.
Mgbanwe dị ukwuu agbanweela n'ụzọ anyị si arụ ọrụ na ọnwa ndị na - adịbeghị anya nke na ụfọdụ n'ime anyị nwere ike ha agaghị achọpụta ozugbo ụdị ụdị ọhụụ dị iche iche na-enwete ugbua tupu ọrịa zuru ụwa ọnụ etiwapụ. Dị ka ndị na-ere ahịa, teknụzụ ebe ọrụ na-aga n'ihu na-eme ka anyị bịarukwuo nso dịka otu ka anyị wee nwee ike ijere ndị ahịa anyị ozi n'oge nsogbu ndị a, ọbụlagodi mgbe anyị na-agabiga ihe ịma aka na ndụ anyị. Ọ dị mkpa ka na-eme ihe n'eziokwu na ahịa, dị ka